अवशरको पहाड र चुनौतिको भुंग्रो नजिक ७६ औं जिल्लामा दुई महिला » नेपाल प्लस
अवशरको पहाड र चुनौतिको भुंग्रो नजिक ७६ औं जिल्लामा दुई महिला
चितवनलाई ७६ औं जिल्ला भन्छन् धेरैले । यो जिल्ला शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राक्रितिक स्रोत सम्पदा सबैमा अगाडि छ । देशभरिका टाठाबाठा आएर बनेको जिल्ला भएकाले यसलाई अन्य जिल्लाबाट अलग राखेर ७८ औं जिल्ला भन्ने गरियो । यो जिल्ला राजनितिक रुपमापनि सबल, कठिन र चुनौतिपूर्ण छ । पूर्व प्रधनामन्त्री पुष्पकमल दहालको ग्रिह जिल्ला । पहिलेका प्रधानमन्त्रि, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालासमेत उमेदवार बनेको जिल्ला । त्यसैले देशभरको आँखा लाग्छ, यो जिल्लामा । यो जिल्लाको पहिलो महानगर पालिका, भरतपुर महानगर पालिका । यस्तो विशेष र महत्वपूर्ण नगरपालिका हाँक्ने माथिल्लो दुबै तहमा महिला निर्वाचित भएका छन् ।
पहिलो पटकको निर्वाचनमा मतपत्र च्यातिए । ठूलो बिवाद र हंगामा भयो । विश्वभरि यो निर्वाचन क्षेत्र बहस र बिवादमा छाइरह्यो । अन्तत दोस्रो तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दहाल मेयरमा बिजयि भईन । नेपाली कांग्रेसकी पार्वती शाह उपमेयरमा बिजयी भएकि छन् । कांग्रेस-माओवादी गठबन्दनका दुबै नारीले पहिलो र दोस्रो पद पड्काए । यसकारणलेपनि यो निर्वाचन क्षेत्र, चितवन जिल्ला र यि नारी फेरि चर्चामा पुगेका छन् । राजनितिक रुपमा कहिँ कतै वैचारिक आस्था नमिल्ने, उद्देश्य र राजनितिक दस्तबेजको मेलपनि नकहने दुई बिरोधी पार्टीबिच कसरि चुनावी तालमेल मिल्यो । यस कारणलेपनि यति बिघ्न चर्चा बटुलेको हो । निर्वाचनमा जसरि तालमेल भयो अब कार्यशैलीमा उसैगरि तालमेला यि दुई नारीबिच होला की नहोला ? अहिलेनै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
निर्वाचनका बेलामा मात्रै होइन, यो जिल्ला सधैं चर्चामा रहिरहन्छ । रहँदै आएको छ । राजनितिक मैदानको केन्द्रबिन्दूभित्र पर्छ चितवन । त्यसैले यो जिल्ला हाँक्न त्यति सहज छैन । भगोलिकरुपमा केहि सहजभएपनि राजनितिक रुपमा यो जिल्ला हाँक्न सहज मानिन्न ।
यो झन महानगरपालिका पनि हो । रेणु दहालले हराएका उमेदवार देवी ज्ञवाली त्यहाँका लोकप्रिय नेता हुन् । उनले यो महानरपालिकामा निकै राम्रो काम गरेर निकै प्रशंसा बटुलेका थिए । उनले गरेका असल कामहरुलाई बिर्साउनेगरि अझ उच्च तहको सामाजिक काम, विकास र भएका योजनाको प्रभावकारि कार्यान्वयन नयाँ मेयरसित यहाँका जनताको चासो हो । त्यो पुरा गर्न नसक्ने संकेत मिल्नासाथ रेणु दहालप्रतिको असन्तुष्टि आकाशिने छ । यसले समग्रमा उनको पार्टीलाई अझ कमजोर बनाउने छ ।
निर्वाचनका बेला सहकार्य गरेजस्तै उपमेयरलाई महानरपालिकाका काम, कर्तब्य, योजना र विकासका काममा सहभागि, साझेदारी बनाएर लैजान सक्नु रेणु दहालको अर्को चुनौति र अवशरपनि हो । मेयर र उपमेयर दुई अलग पार्टीका भएकाले पक्कैपनि अब राजनितिक दाउपेचको कसरत हुनेनै छ । त्यसमा सँगै लिएर हिँड्नसक्ने कार्यकुशलता र अक्किल दहालमा हुनै पर्छ ।
पक्कैपनि यो जिल्लामा अन्य सभासद छन् । वडा, गाउँपालिका र नगर पालिकाका निर्वाचित निकाय छन् । अन्य राजनितिक निकाय र तिनका नेत्रित्व छन् । तर आधिकारिक र प्रशासनिक तरिकाले महानगरपालिकाको नेत्रित्व गर्न पाउनु अलग हो । प्रशासनिक अधिकारसहितको नेत्रित्वलाई बढि अवशर हुन्छ । भरतपुर नगरपालिकाको अबको नेत्रित्वले गर्ने कार्यशैली र क्षमताले जिल्लाका अन्य क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने छ ।
आधा आकाश धान्ने महिलाहरुलाई अवशर दिईएन । महिलाहरुको समान सहभागिता हुनुपर्छ, हरेक क्षेत्रमा । यो मुद्दा निकै उठ्ने गरेको हो । अहिले देशकै प्रथम महानरपालिकाको मेयर हुने अवशर तिनै महिलालाई मिलेको छ । यसमा अझ उपमेयरको मौकापनि महिलालाईनै जुरेको छ । महिलाहरु पुरुष जत्तिकै सक्षम हुन्छन् कि हुँदैनन् ? पुरुषभन्दा अझ सक्षम बनेर कार्य गर्न सक्लान् कि नसक्लान् ? के फरक हुन्छ ? के पाउँछन् जनताले महिला नेत्रित्वबाट ? नेत्रित्वमा पुगेपछि महिलाहरु कति सक्षम हुन्छन् ? त्यो देखाउने चुनौति थपिएको छ, यि दुई महिलामाथि । ७६ औं जिल्ला भनेर चिनिने चितवनको मुख्य केन्द्रको नेत्रित्व लिएर महिला नेत्रित्वलाई स्थापित र लोकप्रिय बनाउने वा नबनाउने, बलियो बनाउने वा कमजोर रेणु दहाल र पार्वती शाहको कार्यशैली र क्षमतालेपनि देखाउने छ । त्यसैले नवनिर्वाचित यि दुई महिला अवशरको पहाड र चुनौति अनि आलोचनाको भुंग्रोमा उभिएका छन् ।